दसैँमा मासु खान कस्तो खसी ठिक ? चिकित्सकले दिए यस्तो महत्वपूर्ण सुझाव – Etajakhabar
दसैँमा मासु खान कस्तो खसी ठिक ? चिकित्सकले दिए यस्तो महत्वपूर्ण सुझाव
दसैँमा खसी–बोका तथा च्यांग्रा खरिद गर्ने तयारीमा पक्कै हुनुहोला । तर, खसी–बोका किन्दै गर्दा केही कुरामा भने सजगता अपनाउनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा त दसैँलाई भनेर केही समयपहिलेदेखि नै बोका पालेर राखिएको हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले खसी–बोका किन्दा विशेष सजग हुनुपर्छ । मोटोपन राम्रो होइन । मोटोपनले शरीर रोगी बनाएको हुन्छ । त्यसैले मोटा खसी–बोकाको मासु खानु दुई कारणले हानिकारक हुन्छ । मोटा खसीबोका रोगी हुने भएकाले रोगी मासुले फाइदा गर्दैन । बोसोले पनि असर गर्छ । बोसोपन बोकामा भन्दा खसीमा बढी हुन्छ । बोसो स्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हो । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ । मुटुसम्बन्धी रोग भएकालाई झनै हानिकारक हुन्छ । त्यसैले खसी किन्दा सकेसम्म दुब्लो नै किन्नुहोस् ।
खसीको शारीरिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । किन्न आँटेको खसी–बोकालाई बाँधेको ठाउँबाट फुकाउनुहोस् र हल्का धपाएजस्तो गरेर हिँड्न लगाउनुहोस् । लोसे खालको हिँडाइ तथा गतिविधि देखायो भने पूर्ण स्वस्थ नभएको बुझ्नुपर्छ । फुर्तिलो, छुँदा बुरुक्क उफ्रिने, चलमलाउने हुनुपर्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २५, २०७४ समय: ९:५०:३९